मलेरिया रोकथामको औषधि ३ महिनादेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा अलपत्र – Himalaya TV
Home » समाचार » मलेरिया रोकथामको औषधि ३ महिनादेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा अलपत्र
मलेरिया रोकथामको औषधि ३ महिनादेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा अलपत्र
२६ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:५४
बाजुरा, २६ असोज ।
मलेरिया रोकथामका लागि छर्किनु पर्ने औषधि तीन महिनादेखि बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा थन्किएको छ ।
‘सेभ द चिल्ड्रेन’को सहयोगमा जिल्लाको उत्तरी भेग बूढीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टी रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा साउनमा पठाएको थियो । औषधि साउनमा छर्किनुपर्ने भए पनि बजेट नभएको भन्दै तीन महीना बितिसक्दा पनि समुदायमा औषधि छर्न नसकेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. सत्य शाहीले बताए ।
औषधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा साउनमा आएको हो, साउनमै प्रत्येकको घरमा पुगेर घर र चर्पीमा ओसिलो ठाउँमा औषधि छर्कनुपर्ने हो । तर नगरपालिकालाई तीन लाख माग गर्दा एक रुपैयाँ पनि नदिँएपछि औषधि स्वास्थ्य केन्द्रमा अलपत्र रहेको डा. सत्य शाहीले बताए।
मलेरिया फैलिने भनेको गर्मी र वर्षादको समयमा हो । चैतदेखि जेठमा छर्कियो भने औषधिले तीन महिना काम गर्छ । नगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीका कारणले मलेरिया जस्तो सरुवा रोगको औषधि अलपत्र रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ । -रासस